एक sacrament र gerunds, आफ्नो सुविधा र प्रत्यय के हो
पनि स्कूलमा, हामी सम्झना यो सहभागिता कि र gerunds। बोली बोल्न सक्नुहुन्न यी भागहरु को रहस्य बारे: अझै पनि रूसी भाषा को आकृति आफ्नो स्थान बारे प्रश्न समाधान छैन। आफ्नो मुख्य सुविधाहरू, पक्षहरू, र हाम्रो लेखमा मतभेद विचार गर्नुहोस्।
अज्ञात बोलीको यी भागहरु को भाग्य छ। हालको विद्यालय कार्यक्रम मा, लेखकको शैक्षिक जटिल आधारमा एक participle र मौखिक adverb, विभिन्न तरिकामा व्याख्या के को अवधारणा। यस्तो Razumovskaya रूपमा केही लेखक, ठीकै पनि क्रिया को आफ्नो विशिष्ट प्रकारका विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ एक participle र adverbial participle एक क्रिया हो जबकि, यो केही सत्य पक्कै छ।
तर Babaytseva, शिक्षण सामाग्री को लेखक, एक पूर्ण रूपमा विचार , बोली को अलग भाग परिसर को सुविधाहरू possessing।
दुवै संस्करण तिनीहरूले तार्किक हो, अवस्थित एक हक र तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै तर्क हुन सक्छ।
यहाँ उहाँले त रहस्यमय रूसी थियो। Participle र gerund - हाम्रो बोली थप गतिशील र रंगीन बनाउन विशेष प्रकारका।
को सहभागिता को मात्रा
आफ्नै उल्लेखनीय मा बोली को कुनै पनि भाग। र के gerunds र participles तिनीहरूले विशेष प्रस्ताव भन्ने, के गर्न सक्दैन बोलीको अन्य भागहरु? आफ्नो मुख्य विशिष्ठ सुविधा - पालैपालो को गठन। तिनीहरूलाई को एक निर्भर शब्द छ जब यो हुन्छ।
उदाहरणका लागि: एक केटी गर्मी बगैचा मा हिड्ने प्रकृति प्रशंसा। हामी यो प्रस्ताव ध्यान विचार भने, हामी सहभागिता "हिंड्न" हेर्न तपाईं "कहाँ?" प्रश्न गर्न सक्छन्। जवाफ वाक्यांश "गर्मी बगैचा" छ। यसले हामीलाई अगाडि तस्करी संलग्न थियो भन्ने हो। endlessly शब्द "जो" दोहर्याउँदै भन्दा धेरै सुन्दर र चतुर प्रयोग गति।
एक अल्पविराम राख्न भूल छैन, यदि participial खडा आफ्नो भाषण परिभाषित पछि (यहाँ यो "केटी" छ)। प्रश्न पार्सिङ गर्दा उठ्छ: यो जोड कसरी? यसलाई सरल छ: परिभाषित शब्द (केटी) के को प्रश्न सोध्न? संकल्प - यो वाक्यको एक सानो भाग, पूरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यसलाई सम्पूर्ण सम्पूर्ण कारोबार तरंग लाइन जोड गर्न आवश्यक छ।
जहाँ कारोबार उहाँको वचन को सामने निर्धारण गरिन्छ मामला मा, सबै कुरा फरक छ। त्यहाँ अल्पविराम राख्न कुनै आवश्यकता छ। यस्तो तस्करी मा Syntactic समारोह फरक - भाषण प्रत्येक भाग यसलाई स्वतन्त्र जोड छ।
तिनीहरूलाई अवस्था अलि फरक छ। पहिले, को gerund नै कुनै शब्द हुनसक्छ छैन निर्भर, तर, तैपनि, अल्पविराम द्वारा विनियोजन गरिनेछ। भाषाविद् यो एकल कल।
उदाहरणका लागि: सोचाइ बिना, उहाँले जल घरमा मान्छे सुरक्षित गर्न हतारिएको।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, gerund को क्रियाविशेषण अर्थ मा धेरै समान छ (यहाँ जवाफ प्रश्न "कसरी?")। तपाईं बोलीको यो भाग पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्छ: तुरुन्तै मानिसहरू सुरक्षित गर्न बलिरहेको घरमा हतारिएको।
आफ्नो भाइ-participle संग मामला छ रूपमा, gerund शब्दहरू subdue र बारी जसबाट फारम गर्न सक्छन्। यस वाक्य सधैं एउटा मात्र भूमिका पूरा किनभने, यो भनिन्छ अलग परिस्थितिमा। विराम चिह्न आधा द्वारा पनि चतुर छैनन् संग: बिल्कुल सधैं अल्पविराम। र परिभाषित शब्द को कारोबार सापेक्षित disposed छ जस्तो गर्छन्।
उदाहरणका लागि: आफ्नो गृहकार्य गर्न छैन, misha एक पैदल लागि गए।
"गृहकार्य" - gerunds द्वारा "? के" अनि जवाफ प्राप्त प्रश्न "गरेको छैन" सोध्नु। हामीलाई अघि - मौखिक participle वाक्यांश।
participles को प्रत्यय र gerunds
बोली प्रत्येक भाग को Derivation पाँचौ ग्रेड देखि विद्यार्थीहरू अध्ययन। तिनीहरूलाई केही (उदाहरणका लागि, संज्ञा र विशेषण) र मात्र पूर्व फिक्स छैन नयाँ शब्द प्रत्यय को उद्भव धेरै तरिकाहरू छन्, तर साथै र संक्षिप्त। संग participles र gerunds सबै सजिलो: शब्द गठन को आफ्नो मुख्य बाटो - यो प्रत्यय। यसलाई हामी बोलीको अन्य भागबाट तिनीहरूलाई छुट्याउन यो morpheme लागि हो।
थाह यस्तो सहभागिता र gerunds, प्रत्यय गाह्रो छैन सम्झना छ। तपाईंले केही सरल नियमहरू जान्नु आवश्यक छ। सक्रिय र निष्क्रिय: को sacrament दुई ठूलो समूह विभाजन गरिएको छ कि भूल छैन।
जो वर्तमान काल हो deystvmielnyh participles, मा, प्रत्यय हो: घाटी / Yusch (नृत्य, गायन), ARG / crate (flashy, उडान)।
निष्क्रिय हामी - समाई (हल्लाइन्छ), -om- (द्वारा आएको) तिनीहरूलाई (निर्भर)।
सहभागिता पछिल्लो काल मा हुँदा, तिनीहरूलाई पनि जमानत मा हुनेछ भेद गर्न।
Deystv.prich। - vsh- (किनेको), W (हुर्किसकेका)।
Strad.prich। - m- (कटा), -enn- (scrolled) -nn- (vymeryat)।
तपाईं के गर्न आवश्यक मुख्य कुरा हो - सही बोली को भाग निर्धारण। त्यसपछि participles को प्रत्यय, gerunds सजिलो धेरै सम्झना। विशेष गरी, आपसमा समान छन्।
जमानत को श्रेणी कुनै gerunds छ तिनीहरूले मात्र समय मा फरक। Nast.vr: -। एक (बिस्तारै) -I (अनुमान), -uchi (हुनुको) -yuchi (क्लोभर)। बितेका समय: --उत्पादन (बनाउन) -vshi (थाहा थिएन)।
participles र gerunds को प्रत्यय व्यवहार मा सम्झना गर्न सजिलो हुन्छ। यो आफ्नो हिज्जे मिलाउने, विषयमा केही अभ्यास गर्न पर्याप्त छ। यी क्रिया प्रकारका को स्पष्ट जटिलता भए तापनि तिनीहरूले ध्यान नियम पढ्न भएकाहरूलाई लागि धेरै कठिनाई प्रस्तुत छैन।
Homogeneous र heterogeneous संकल्प: उदाहरण
उतेजना - यो के हो? शब्द को पर्यायवाची र
Divergent - यो हुनुहुन्छ? हामीलाई बीचमा Divergent
खराब वाशिंग मिसिन: मुख्य कारण
इवान-चिया। आवेदन र तयारी
पत्थर को तस्वीर - एक स्टाइलिश र घर सजावट लागि सुन्दर
एक असामान्य मिठाईको लागि पकाउनुहोस्: मीठा पास्ता सॉसेज
नुस्खा बीफ करङहरु - स्वादिष्ट र सन्तोषजनक!
बिल्ली को बच्चा Savannah: घरमा सामग्री